ISTICMAALKA BORIC ACID DHEGEYSIGA CARRUURTA 1, 2, 3, 4-5, 6-7 BILOOD IYO ILAA SANADKA: HADDII AY SUURTAGAL TAHAY IN LA JIIDO OTIS IYO XANUUN, TILMAAMO KU SAABSAN SIDA LOO DAWEEYO CADAADISKA IYO XANNAANADA - WIXII MARTIDA
3 siyaabood oo waxtar leh oo lagu daweeyo carruurta leh boric acid. Tilmaan-bixinta isticmaalka antiseptic
Boric acid waxaa isticmaalay awoowayaasheenna si loogu daaweeyo cudurrada kala duwan. Daawada casriga ah, waxaa loo isticmaalaa dhakhtarka indhaha, dhakhtarka maqaarka iyo dhakhaatiirta autolaryngnologists. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta dhegaha. Sida caadiga ah, boric acid waxaa loola dhaqmaa dadka waaweyn. Sida carruurta, waxaa jira fikrado kala duwan oo arrintan ku saabsan.
Boric acid waa antiseptic. Waxay si firfircoon u abuureysaa jawi aan fiicnayn oo loogu talagalay fayraska iyo bakteeriyada. Sidaa daraadeed qaybintooda ayaa joojisa. Waxay sidoo kale ka saartaa geeddi-socodka bararka, oo wuxuu ku diiriyaa goobta gubashada. Sidaa darteed, boric acid kicin leh cudurka ee dhegaha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in maaddadu ay si fiican u nuugto maqaarka waxayna si fudud u galaan dhiiga. Laakiin si aad uga bixisid jidhka ma aha mid fudud.
Miyuu suurtogal ah in la furo ciyaalka qalabkaan?
Ka hor inta aan la isticmaalin boric acid ah oo loogu talagalay dhageysiga carruurta, waxaa muhiim ah in lala tashado takhasusle. Sababtoo ah dhegaha carruurta ee ku dhici kara sababo kala duwan, hadana had iyo jeer ma aha mid ku haboon daaweynta boric acid.
Waa muhiim! Daaweynta walaxahan waxay saameyn xun ku yeelan kartaa xuubka xuubka.
Tilmaamaha isticmaalka ayaa tilmaamaya in faleebada boric acid laguma talinayo carruurta ka yar 14 sano.. Hase yeeshee, dhakhaatiir badan oo otolaryo ah ayaa wali u qora daaweynta dhagta carruurta 3 sano. Dhaqtarka, oo ku salaysan khibradiisa xirfadeed iyo kiis gaar ah, ayaa kuu qori kara daaweyn noocaas ah.
Boric acid waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo:
dibadda iyo celceliska otiska;
furunculosis ee kanaalka maqalka.
Iyada oo ku xiran nooca cudurka, dhakhtarku wuxuu soo qori karaa:
dhagaxyada lagu aaso;
cadaadis ama tartiib tartiib ah oo ah kanaalka dhegta.
Sidoo kale, daaweynta dheeraadka ah ee isku dhafan ayaa loo qori doonaa daaweynta otista.sababtoo ah boric acid kaliya waa lama huraan.
Da 'ahaan illaa 14 sano si adag sida waafaqsan maragga dhakhtarka.
Cudurrada kelyaha ee kala duwan.
Dareenka xasaasiyadeed ee qaybaha daroogada.
Haddii xuubka xuubka dhaawacmay.
Daaweynta cudurada ENT, xalka ugu badan ee loo isticmaalo boric acid waa 3%.. Si kastaba ha noqotee, carruurta yaryar, xooga saarista walaxda waa la yarayn karaa. Waxaa lagu iibiyaa dhalooyinka 10 ilaa 100 ml. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga heli karaa foomka budada. Waxaa lagu baakado 10g ama 25g. Waxaad ka iibsan kartaa farmashiyo kasta. Oo ma aha mid qaali ah.
Magaalada Moscow, budada ayaa laga iibsan karaa 40 rubiir, xal 20 rodol.
In St. Petersburg, xalka waxaa laga heli karaa 15 RUB, budada ah 40 rubiir.
Sidaas Ka hor intaanad bilaabin aashitanka dhegta ilmahaaga, waxaad u baahan tahay inaad la tashato khabiir. Waxaa muhiim ah in aan dhegaysanno hooyooyinka iyo ehelada waqtiga xanuunka dhegaha ee ilmaha, kuwaas oo sheegaya in lagu daaweeyay habkan oo dhan noloshooda iyo in wax walba ay fiican yihiin.
Digniin! Dhaqtarka oo kaliya ayaa go'aaminaya in uu qoro boric acid dhegta ilmaha, ka dib, sida caadiga ah, ma noqon doonto habka kaliya ee daaweynta. Inta badan, waxaa la qori doonaa koorsooyin dheeri ah oo ku saabsan walxaha bakteeriyada.
Boric acid waxay ku fidisaa bakteeriyada cudur keena, sidaa daraadeed, waxay yareysaa caabuqa iyo xanuunka cunuga ee ka yareeya.
Sidee loo aasaa daawada antiseptic ee dhagta dhagta?
Dhalo leh xal of boric acid waa in la kululeeyo. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim inaad hubiso in aad u baahan tahay inaad diirimaad sameyso. Waxa ugu fiican marka xalka la kululeeyo heerkulka jidhka. Waad ku diirin kartaa adigoo ku dhejinaya dhalada yar yar biyo diirran.
Ilmuhu wuxuu ubaahan yahay inuu dhigo dhinaciisa. Caafimaad qabsan. Ilmuhu waa inuu noqdaa mid raaxo leh intii suurtagal ah.
Dhegtu waa inay ahaato mid si taxadar leh loona nadiifiyaa wasakhda. Sidaa awgeed, dharka suufka leh ee loo yaqaan 'hydrogen peroxide' ayaa loo isticmaalaa.
Si loo xoqo dhegta cunnuga xalka 3% boric acid. Tirada dhibcaha uu dhakhtarku soo qoray. Marka dillaacdo, waxaa lagu talinayaa in si yar loo jiido dhegta si loo sii galo daawada daroogada. U sheeg ilmaha inuu jiifo ilaa 10 daqiiqo.
Daawada inteeda kale ku qallaji suufka ama wareegga.
Ku dhaji maqlaha dharka suufka.
Hadday labada dhagoodba xanuunsadaan, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qalliinka isku midka ah dhegta kale.
Dhakhtarku wuxuu qeexayaa habka daaweynta. Badanaa waa lagama maarmaan in la geliyo dhegta 2-3 jeer maalintii. Waqtiga ugu badan ee dillaacu kama badna 7 maalmood.
Ka dib 3-4 habraaca kaddib marka bilowga la bilaabayo, xanuunka ayaa baaba'aya, iyo raaxo la'aantu way baaba'aysaa. Laakiin Ha joojin daaweynta ka dib natiijooyinkii ugu fiicnaa ee hore. Waa muhiim in la raaco talooyinka dhakhtarka oo natiijada u soo baxa ilaa dhamaadka si cudurku u soo noqdo. Haddii boric acid la heli karo oo kaliya sida budada. Kadibna waa in si fiican loo qasi karaa, ka dib tilmaamaha.
Caawimaad! Had iyo jeer maahan daaweynta dhagaha in dhageysiga loo isticmaalo. Sidoo kale cadaadis wanaagsan oo boric acid ah ayaa ka yareeya barar iyo xanuun dhegta. Si kastaba ha ahaatee, caruurta ka yar hal sano ayaa sidoo kale mamnuuc ah. Si aad u codsato cadaadiska noocaas ah waxaa suurtagal ah oo keliya talada ku takhasusay. Badanaa daaweyntan ayaa la qoraa marka lagu dhufto dhegta.
Isku dhufashada Dusha
Isku qas maaddooyinka: boric acid iyo biyo. Miisaankoodu waa inuu isku mid yahay. Si cadaadiska aad u baahan tahay qiyaastii 40 ml ee isku darka.
Samee tijaabo loogu talagalay falcelinta xasaasiyadda. Haddii xanuunka uusan bilaabmin ka dib 20-30 daqiiqo, waxaad sameyn kartaa cadaadis.
Si aad u cadaadiso u baahan tahay dhawr xabbo oo maro ah. Waa inaad marka hore gooyaa daloolka dhexe ee dharka.
Ka dalbo faashad qallalan oo ah unug dhuunta. Sidaa darteed, waxay kaa caawin doontaa inaad iska ilaaliso gubashada. Ka dibna qoyi labaad ku qooto xaraar diirran oo gashadana dhegeyso.
Dabool dharka leh polyetylen.
Waxaan ku dhejin karnaa suufka polyetylen.
Ku dheji cadaadiska faashadda.
Muddo ka dib, waa lagama maarmaan in mar labaad la mariyo dharka.
Waqtiga joogtada ah ee joogtada ah waa qiyaastii 2 saacadood.
Sida caadiga ah, isticmaalka cadaadiska waxaa soo qoray takhtar haddii ay dhacdo in uu jiro war-celin otomaatik ah.. Turunda waxaa loogu talagalay furfurnaanta jiritaanka.
Sidee loola dhaqmaa cayayaanka?
Cunto boric acid heerkulka qolka.
Suufka suufka ah ee xakamee oo yaree u tuuji.
Si tartiib ah geli galka dhegta oo u dhaaf ilaa dhowr saacadood.
Muddo ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in aad ka soo baxdid cirridka iyo suufka suufka dhegaha si aan bakteeriyada u dhicin.
Digniin! Iyadoo ku xiran sababta cudurka, boric acid waxaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan. Waalidiintu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in kastoo ay leedahay saameyn wanaagsan oo ka hortag ah, isticmaalka wuxuu sababi karaa waxyeelo kala duwan.
Matag, lalabo, dawakhaad.
Hawlgabka kalyaha oo daciif ah.
Finan maqaarka. Gubasho haddii loo isticmaalo si aan sax ahayn.
Ujeedada daroogada, waxay kuxirantahay da'da
Daawooyinka casriga ah, waxaa jira siyaabo badan oo lagu daaweyn karo dhagaha ilmaha. Sidaa darteed, boric acid laguma qoro daaweynta carruurta dhasha iyo carruurta ka yar hal sano.
Haddii ilmuhu 2 sano jir yahay oo dhakhtarku u arko inay muhiim tahay in la qoro boric acid, ka dibna xaaladaha noocaas ah waxaa loo isticmaalaa isbitaal iyagoo hoos yimaada kormeerka dhakhaatiirta. Aan guriga joogin. Sababtoo ah boric acid si fudud ayaa loo nuugo dhiigga waxaana lagama maarmaan ah in la kormeero fiirsigeeda, si uusan u sumoobin ilmaha.
Sidoo kale laguma talineynin carruurta da'doodu u dhaxayso 3 sano si ay u daadiyaan boric acid dhegta, inkastoo da'doodu ka yartahay 3 jir dhakhtarku wuxuu u qori karaa daaweyn leh cadaadis, halka foojignaanta ay noqon doonto mid hooseeysa. Waqtiga soo-saarka waa in la dhimo ilaa 1 saac.
Laga bilaabo 4-5 sano, dhakhtarku wuxuu u qori karaa oo kaliya ma cadaadin, laakiin sidoo kale turunda dhegaha. Inta badan waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo tartiib tartiib ah oo la qasi karo 3% xal.
Carruurta da'doodu tahay 6-7 sano jir ayaa dhakhtarku qori karaa oo kaliya maaha cadaadis iyo kambiyuutaro ku yaal kanaalka dhegta, laakiin sidoo kale xoqidda boric acid dhegta.
Marka uu dhego-xanuun ku dhaco ilmo, waalidku waa in ay xasuusnaadaan in aysan qiimo u laheyn is-daaweyn, adigoo kali kugula tali boric acid adiga oo aan dhakhtar qorin. Xaqiiqda ah in dadka qaangaarka ah badanaaba ay u qoraan maaha sababo loo adeegsado daaweynta ilmaha. Dhamaan oo dhan, dhagaha ayaa la sameeyaa muddo dheer ka dib dhalashada, iyo dhismaha dhagaha wuu ka duwan yahay dadka waaweyn. Sidaa daraadeed, amniga cudurrada dhegta had iyo jeer waa lagama maarmaan in la tashadaan takhasus.